Malunga nathi -Mingsanfeng Cap zomngundo Co., Ltd ..
Inaliti Cap zomngundo
Ikepusi yediski ephezulu
Flip Phezulu kwiKapa
Ikofu yeBhotile yokuhlamba iimpahla
Mingsanfeng Cap Umngundo Co., Ltd yasekwa ngoJuni 1999, le nkampani ligxile kuphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo inaliti iminqwazi zeplastiki. Umzi mveliso unendawo yokusebenzela yokubumba, enamava atyebileyo kwi-R & D kunye nokuveliswa kwesikhunta seplastikhi, kwaye unokwenza ngokwezifiso zonke iintlobo zeebhotile. Le nkampani iye phantse-60 abasebenzi, kuquka malunga 10 iinjineli, iinjineli 20 ngumngundo abaphezulu kunye namagcisa aphezulu 30.
Inkampani yamkela imo yolawulo lwangoku, enexabiso lemveliso yonyaka yezigidi ezingama-35.Henceforth, siya kuzinikezela ukuba sibe "nguMboneleli weNkonzo eNye" yenkonzo kunye nemveliso esusela kuyilo lokungunda, ukuvelisa ukungunda, ukwenziwa kwenaliti, ukuhlangana kunye nasemva ukuthengisa.
Mingsanfeng Cap Umngundo Co., Ltd yasekwa ngoJuni 1999, le nkampani ligxile kuphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo inaliti iminqwazi zeplastiki. Ngazo zonke iintlobo zeeflip top caps, disc top caps, unscrew caps, security engineer-caps caps, washing liquid covers, cosmetic body bodies and caps etc. njl.
Umzi mveliso unendawo yokusebenzela yokubumba, enamava atyebileyo kwi-R & D kunye nokuveliswa kwesikhunta seplastikhi, kwaye unokwenza ngokwezifiso zonke iintlobo zeebhotile. Le nkampani iye phantse-60 abasebenzi, kuquka malunga 10 iinjineli, iinjineli 20 ngumngundo abaphezulu kunye namagcisa aphezulu 30. Inkampani yamkela imo yolawulo lwangoku, inexabiso lonyaka lokuphuma kwezigidi ezingama-35.
Le nkampani iye phambili izixhobo imveliso kunye nezixhobo ibandla oluzenzekelayo kunye workshop yenaliti GMP. Iiseti ezingama-20 zizonke eziyi-100-350T zokungenisa ngaphakathi koomatshini zibandakanya iJapan Toshiba, JSW, Germany Demag. It has a prototyping ukungunda ngokukhawuleza kunye nenkqubo yembaleki eshushu yokubumba kunye noMngundo wokuvala (IMC). Sinako ukwenza zonke iintlobo ubunzima, ngumngundo ophezulu-ngqo kunye neemveliso inaliti ezizodwa kubathengi isiphelo eliphezulu ngamazwe. Ingcali kuyilo kunye nokulungiswa kwemveliso yeemveliso ezahlukeneyo zebhotile. Uphando kunye nophuhliso lwezixhobo zokubumba yiYasda, iOkuma, i-OKK, iHatting kunye neJapan Longze. Izixhobo zokufumanisa zibandakanya iZeiss enamacala amathathu kunye neMbini-mbini. Ukusukela ngoku, siya kuzinikezela ukuba sibe ngu "One Stop Service Provider" senkonzo kunye nemveliso esusela kuyilo lokungunda, ukuvelisa ukungunda, ukuqhuba ngenaliti, indibano nasemva kwentengiso.
NO. 22, Huatianbei 1st Road, Gaoxin IndustriaI Park (uiRongg), iSithili seShunde, kwiSixeko saseFoshan, eGuangdong P.RChina